Celebrity – Sunthit Myanmar
အမရေိကနျနာမညျကွီး တေးရေး၊ တေးဆို Mark Ronson ဟာ sapiosexual တဈဦးဖွဈကွောငျး ကိုယျတိုငျထုတျဖျောပွောကွား
ယခုနှဈ Oscar ဆုပေးပှဲမှာ “Shallow” သီခငျြးဖွငျ့ အကောငျးဆုံးမူရငျးသီခငျြးပိုငျရှငျဆုကို ရရှိခဲ့သော အသကျ (၄၄)နှဈ အရှယျရှိ အမရေိကနျနာမညျကွီး တေးရေး၊ တေးဆို Mark Ronson ဟာ sapiosexual တဈဦး ဖွဈ ကွောငျးကို စကျတငျဘာလ (၁၉)ရကျ ကွာသပတေးနတှေ့ငျ ပွုလုပျခဲ့သော ITV’s Good Morning Britain TV အစီ အစဉျမှာ သူကိုယျတိုငျထုတျဖျောပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ ထိုသို့ sapiosexual တဈဦးဖွဈကွောငျး ထုတျဖျောပွော ဆိုပွီး နောကျ အစီအစဉျကို တငျဆကျတဲ့ Anchors Ben Shephard နှငျ့ Kate Garraway တို့က ဂုဏျယူကွောငျး ခြီး ကြူးပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။ sapiosexual ဆိုတာ လူတဈယောကျဟာ ဘယျလိုလိငျအမြိုးအစားလဲဆိုတာကို စိတျမဝငျစားပဲ… Continue reading အမရေိကနျနာမညျကွီး တေးရေး၊ တေးဆို Mark Ronson ဟာ sapiosexual တဈဦးဖွဈကွောငျး ကိုယျတိုငျထုတျဖျောပွောကွား
Categorized as Celebrity, Entertainment, News Tagged US ရဲ့ နာမညျကွီး တေးရေး၊ တေးဆို Mark Ronson ဟာ sapiosexual တဈဦးဖွဈကွောငျး ကိုယျတိုငျထုတျဖျောပွောကွား
အဆိုတျော Eddie Money က အစာပွှနျကငျဆာ အဆငျ့ (၄) ခံစားနရေကွောငျး ထုတျဖျောပွောကွား
အသကျ (၇၀) ရှိပွီး Eddie Money လို့လူသိမြားတဲ့ အမရေိကနျရဲ့ နာမညျကွီးအဆိုတျော Edward Mahoney ဟာ အစာပွှနျကငျဆာ အဆငျ့(၄)ကို ခံစားနရေကွောငျး ဩဂုတျလ (၂၄)ရကျ စနနေမှေ့ာ AXS TV က ပွုလုပျခဲ့သော Real Money အစီအစဉျတှငျ သူကိုယျတိုငျထုတျဖျောပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ Eddie Money ဟာ ကနျြးမာရေး အလှနျခြို့တဲ့သူ တဈဦးဖွဈပွီး နှလုံးအဆို့ရှငျခှဲစိတျခွငျးနှငျ့ အဆုတျနာရောဂါကို ယခုနှဈအစောပိုငျးမှာ ခံစားခဲ့ရသဖွငျ့ နှရောသီ ခရီး စဉျကိုပါ ဖကျြခဲ့ရတယျလို့လညျးသိရပါတယျ။ Eddie Money မှာရှိနတေဲ့ ကငျဆာဟာ အသဲနဲ့ lymph nodes တှကေို ပြံ့နှံ့နပွေီးဖွဈတဲ့အတှကျ အဆငျ့ (၄) အဖွဈ သတျမှတျခွငျးခံထားရတာဖွဈပါတယျ။ Eddie Money ဟာ… Continue reading အဆိုတျော Eddie Money က အစာပွှနျကငျဆာ အဆငျ့ (၄) ခံစားနရေကွောငျး ထုတျဖျောပွောကွား
Categorized as Celebrity, Entertainment, News Tagged အဆိုတျော Eddie Money တှငျ အဆငျ့(၄) esophageal ကငျဆာရောဂါခံစားနရေပွီးဖွဈကွောငျးထုတျဖျောပွောကွား
အမရေိကနျနိုငျငံ Louisiana ပွညျနယျ အရှတေ့ောငျဘကျရှိ New Orleansမွို့တှငျ မှေးဖှားခဲ့သော အမရေိကနျ အဆိုတျော Grammy ဆုရှငျ Dr John လို့ လူသိမြားတဲ့ Malcolm John Rebennack ဟာ ဇှနျလ(၆) ရကျနေ့ တှငျ နှလုံးဖောကျပွီး သဆေုံးသှးခဲ့ပွီဖွဈကွောငျး သူ၏ တရားဝငျ Twitter အကောငျ့တှငျ တငျထားခကျြအရ သိရှိရပါ တယျ။ သူဟာ The Rock and Roll ရဲ့ ထငျပျေါတဲ့ Hall of Fame အဆိုတျောတဈယောကျဖွဈပွီး blues၊ pop၊ jazz၊ boogie woogie နှငျ့ rockandroll သီခငျြးအမြိုးအစားအားလုံးကိုပေါငျးပွီး ကိုယျပိုငျဟနျဖွငျ့ သီဆိုခဲ့တဲ့ အဆိုတျော တဈဦးဖွဈပါတယျ။ တေးဂီတ… Continue reading Grammy ဆုရှငျ အမရေိကနျဂီတပညာရှငျ Dr John အသကျ (၇၇)တှငျ ကှယျလှနျ
Star Wars ဇာတျကားတှငျ Chewbacca နရော၌ပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့သော မငျးသားကွီး Peter Mayhew သဆေုံး
ဧပွီလ ၃၀ရကျနတှေ့ငျ အသကျ ၇၄နှဈရှိပွီဖွဈတဲ့ မငျးသားကွီး Peter Mayhew သဆေုံးသှားပွီဖွဈကွောငျး သူ၏ ကနျြရဈသူမိသားစုက မလေ ၃ရကျနတှေ့ငျ Twitter လူမှုကှနျရကျပျေါ၌ ထုတျပွနျခဲ့ပါတယျ။ Peter Mayhew ဟာ London မှာ မှေးခဲ့ပွီး British-American မငျးသားဖွဈပါတယျ။ သူအဓိက သရုပျဆောငျခဲ့တာကတော့ Star Wars ဇာတျကားထဲမှာ giant Wookiee warrior Chewbacca နရောဖွဈပါတယျ။ သူဟာ ၁၉၇၇ခုနှဈမှာ စတငျ ထုတျ လုပျခဲ့တဲ့ Star Wars ရဲ့ ပထမဦးဆုံးကားမှ စပွီး Chewbacca နရောတှငျ ပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ Star Wars ရုပျရှငျကို ဖမျတီးခဲ့သူ George Lucas က Chewbacca နရောကို… Continue reading Star Wars ဇာတျကားတှငျ Chewbacca နရော၌ပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့သော မငျးသားကွီး Peter Mayhew သဆေုံး
Categorized as Celebrity, Entertainment, News Tagged Star Wars ဇာတျကားတှငျ Chewbacca နရော၌ပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့သော မငျးသားကွီး Peter Mayhew သဆေုံး
ပိုလနျနိုငျငံက ဝကျရျှ ကုနျတိုကျမှာ အသကျ ၁၀၀ ပွညျ့ခဲ့ပမေယျ့ လုပျအားပေး လုပျနသေေးတဲ့ အဖိုးအို
အဖိုးအိုဟာ ပေါကျပေါကျကို လုပျအားပေးအနနေဲ့ ရောငျးလာတာ အသကျ ၁၀၀ ပွညျ့တဲ့ အခြိနျထိ ဆယျစုနှဈ သုံးစု တိုငျခဲ့ပါပွီ။ ဥရောပမှာ လူတှသေလေောကျတဲ့ စုဝေးမှုတဈခုမတိုငျခငျ အခြိနျထိ နာဇီက ကမျ့တဈခုမှာ စဈသားအနနေဲ့ နှဈနှဈခှဲလောကျလုပျကိုငျခဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒါပွီးတဲ့ နောကျပိုငျး ၁၉၈၁ ခုနှဈကစပွီး ပေါကျပေါကျ ရောငျးလာခဲ့တာပါ။ “ ကြှနျတျော ပေါကျပေါကျရောငျး တဲ့နရောမှာ လုပျအားပေး လုပျလာခဲ့တာ အနှဈ ၃၀ လောကျရှိပါပွီ။ ဒီလိုအလုပျကို လုပျတာနတေို့ငျးလိုလိုပါပဲ။ နားရကျမရှိသလောကျပါပဲ” လို့ သူပွောပါတယျ။ “ ဗွိတိနျတပျမဟာ အပျေါမှာ မှီခို နရေတဲ့ ကြှနျတျောတို့အတှကျ အာဖဂနျကနပွေနျလာတဲ့ သူတှအေတှကျကို အလုပျတှအေမြားကွီးလုပျပေးခငျြပါတယျ။ သူတို့ အကူအညီလိုလာတဲ့အခြိနျမှာ ကြှနျတျောရှိနပေေးပါတယျ။ ကြှနျတျော ရောငျးရတဲ့ ပိုကျဆံတှကေ မြားသောအားဖွငျ့… Continue reading ပိုလနျနိုငျငံက ဝကျရျှ ကုနျတိုကျမှာ အသကျ ၁၀၀ ပွညျ့ခဲ့ပမေယျ့ လုပျအားပေး လုပျနသေေးတဲ့ အဖိုးအို
Categorized as Celebrity, News, Worlds
အဆိုတော်EdSheeran စက်ဘီး အက်စီးဒင့် ဖြစ်၊ အာရှဖျော်ဖြေရေးပွဲအတွက် သက်ရောက်မှူရှိနိုင်
Ed Sheeran ဟာ Instagram မှာ သူစက်ဘီးစီးရင်း အက်စီးဒင့် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းကိုတင်ထားပါတယ်။ သူ့ကို ချစ်တဲ့အမာခံ ပရိတ်သတ်အတွက်တော့ ဒီသတင်းကစိတ်မကောင်းစရာသတင်းပါ။ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ အဆိုတော်လည်းဖြစ် Game-of-Thrones ရဲ့ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်သူ ဟာ လန်ဒန်မှာ စက်ဘီးစီးရင်း အက်စီးဒင့် တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် အာရှခရီးစဉ်အတွင်း သူ့ရဲ့ဖျော်ဖြေမှုကို တစ်စုံတစ်ရာ သက်ရောက်မှု ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ သူ့ ရဲ့ ညာဖက်လက်ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရထားတဲ့ ပတ်တီးစည်းထားတဲ့ ပုံကို တင်ထားပြီးရေးထားတာက “ ကျွန်တော်ဟာ စက်ဘီးစီးရင်း အက်စီးဒင့် အနည်းငယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး လောလောဆယ်မှာတော့ ဆေး နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြံပြုချက်ကို စောင့်နေပါတယ်။ အဲ့လိုစောင့်နေရတဲ့အတွက် ကျွန်တော့်ရဲ့ လာမည့် ဖျော်ဖြေပွဲအတွက် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်သတင်းတွေအတွက်လည်း ဆက်ရှိနေပေးပါ။ Ed x”… Continue reading အဆိုတော်EdSheeran စက်ဘီး အက်စီးဒင့် ဖြစ်၊ အာရှဖျော်ဖြေရေးပွဲအတွက် သက်ရောက်မှူရှိနိုင်
Categorized as Celebrity, News
ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး လူငယ် ၁၀ ဦး
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘယ်လုပ်ငန်းရှင်၊ဘယ်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကတော့ အချမ်းသာဆုံးဆိုပြီး ကမ္ဘာကျော် Forbes မဂ္ဂဇင်းကြီးက နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်လေ့ရှိတဲ့အတွက် လူအများစုက ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးစာရင်းဝင် ဘီလီယံနာတွေနဲ့မစိမ်းကြပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘာပေါ်က အချမ်းသာဆုံး ခလေးတွေအကြောင်းကိုတော့ သိတဲ့လူတွေနည်းကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆန်းသစ်မြန်မာပရိသတ်တွေသိရှိနိုင်စေဖို့ ရှာဖွေတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ (၁) Jaden Smith နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ကြိုက်ကြသူတိုင်း ဒီကလေးကို သိကြပါလိမ့်မယ်။ အမေရိကန် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သလို ရက်ပါ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Jada Pinkett Smith နဲ့ Will Smith တို့ရဲ့ သားလည်းဖြစ်ပြီး ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ သူ့ဖခင် နဲ့အတူစတင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ခုနေခါ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကတော့ ဒေါ်လာ ၉ သန်းဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မိသားစုရဲ့ ၀င်ငွေက ဒေါ်လာ ၅၅၄ သန်းကျော်တဲ့အတွက် နောင်မှာ ဒီကလေးရဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုက… Continue reading ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး လူငယ် ၁၀ ဦး
Categorized as Celebrity, Entertainment, Worlds
သင်မသိသေးသော Taylor Swift ရဲ့ Look What You Made Me Do အောင်မြင်မှုရလဒ်များ
၁။ US မှာ အမျိုးသမီးအဆိုသမီးအဆိုတော်တစ်ယောက်အနေနဲ့ နံပါတ်(၁)နေရာကိုအမြန်ဆုံးရောက်ရှိခဲ့တဲ့ သီချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၂။ US ရဲ့ နံပါတ်(၁)နေရာကို (၉၄)%နဲ့ ယူထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၃။ သီချင်းစာသားဗီဒီယိုဖိုင်ဟာ (၂၄)နာရီအတွင်း (၁၉)သန်းနှုန်းဖြင့် လူကြည့်အများဆုံးကြည့်ခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၄။ Spotify မှာ စတင်သီချင်းတင်တဲ့အချိန်မှ (၂၄)နာရီအတွင်း နားထောင်သောအကြိမ်ပေါင်း(၃.၈၂)သန်းကို ပထမဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ အမျိုးအဆိုတော်ရဲ့ သီချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၅။ စတင်သီချင်းထုတ်လွင့်သည့်နေ့မှာပင် US ရဲ့ ရေဒီိယိုတွေမှာ အကြိမ်(၄၀၀၀)ကျော် လွှင့်ပေးခဲ့ပြီး နားထောင်သူဦးရေ သန်း(၃၀)ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၆။ Youtube ပေါ်မှာ (၂၄)နာရီအတွင်းကြည့်ရှုသူ (၄၃.၂)သန်းရှိပြီး Adele ရဲ့ Hello စံချိန်ကိုချိုးခဲ့ပါတယ်။ ၇။ Youtube ပေါ်မှာပင် 1M likes ကိုရရှိနှုန်း အမြန်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည့် သီချင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ၈။ ကြည့်ရှုနှုန်းသန်း(၁၀၀)ကို… Continue reading သင်မသိသေးသော Taylor Swift ရဲ့ Look What You Made Me Do အောင်မြင်မှုရလဒ်များ
နှစ်(၃၀)အတွင်း ပလပ်စတစ်စကျူရီလုပ်ပြီး အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲသွားသော Michael Jackson
နှစ်(၃၀)အတွင်း မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ဟာ ချောမောစေရန်အတွက် ပလပ်စတစ်ဆာဂျူရီပေါင်းများစွာကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် တစ်ခုလုပ်ပြီး ထိုတစ်ခုရဲ့ ဆိုးကျိုးကို ပြင်ဆင်ရန် နောက်ဆာဂျူရီများ ထပ်ခါထပ်ခါ လုပ်ပြီး ထိန်းသွားခဲ့ရပါတယ်။ နာခေါင်းကနေ စပြီး အသားအရေအထိ ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆာဂျူရီများအနက် နာခေါင်းဆာဂျူရီသည် အထင်ရှားဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ ငယ်ရွယ်စဉ်အခါက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လှောင်ပြောင်ခြင်းခံရသောကြောင့် ဤသို့ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ထိုသို့ ဆာဂျူရီများပြုလုပ်ခြင်းကို တစ်ခါမှ ပင် ဝန်ခံခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ Unicode : နှဈ(၃၀)အတှငျး ပလပျစတဈစကြူရီလုပျပွီး အဆငျ့ဆငျ့ပွောငျးလဲသှားသော Michael Jackson နှဈ(၃၀)အတှငျး မိုကျကယျဂကျြဆငျဟာ ခြောမောစရေနျအတှကျ ပလပျစတဈဆာဂြူရီပေါငျးမြားစှာကို ပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။ သို့သျော တဈခုလုပျပွီး ထိုတဈခုရဲ့ ဆိုးကြိုးကို ပွငျဆငျရနျ နောကျဆာဂြူရီမြား ထပျခါထပျခါ လုပျပွီး ထိနျးသှားခဲ့ရပါတယျ။ နာခေါငျးကနေ… Continue reading နှစ်(၃၀)အတွင်း ပလပ်စတစ်စကျူရီလုပ်ပြီး အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲသွားသော Michael Jackson
Categorized as Celebrity, Entertainment
နာမည်ကြီးသူတို့၏ အံ့မခန်း ဝိတ်တတ်လာပုံများ
နာမည်ကြီး အနုပညာရှင်တော်တော်များများဟာ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ယခုဖော်ပြမယ့် အနုပညာရှင်တွေကတော့ အဆီပိုတွေကို ဖယ်ထုတ်ဖို့မစဉ်းစားတော့ပါဘူး။ ဝမှ လှတယ်ကို ခံယူထားသလားတောင်အောက်မေ့ရပါတယ်။ Vin Diesel Tyra Banks Jennifer Love Hewitt Kate Winslet Kelly Clarkson Kelly Osbourne Eva Longoria Adele Russell Crowe Jennifer Lawrence Jessica Simpson. Britney Spears.
Categorized as Celebrity, Entertainment Tagged celebrities, lifestyle